Kudutshulwe kwabulawa amaphoyisa aqapha ikhansela
Indawo yesigameko lapho kudutshulwe khona amaphoyisa amabili kamasipala eVerulam eThekwini. Isithombe: SITHUNYELWE
INTATHELI YESOLEZWE | May 21, 2019
AMAPHOYISA aKwaZulu-Natal afuna phansi phezulu abasolwa ngokudubula futhi babulale amaphoyisa maqede bawantshontshele izibhamu zawo ngoMsombuluko ebusuku.
Okhulumela amaphoyisa kamasipala, uSenior Superintendent, uParboo Sewpersad, uthe lamaphoyisa, okungelesilisa nelesifazane asebenzela esteshini saseVerulam futhi abeyoqapha ikhansela, ahlaselwe ngezithuba zabo-10 ebusuku.
“Abenkanise ngaphandle komuzi wekhansela oseBhambayi, phakathi kweFernham neStoneham, ngesikhathi abasolwa beqhulula intululwane yezinhlamvu, badubula iphoyisa lesilisa ebelisesihlalweni somshayeli nelesifazane, nalo ebelisemotweni.”
Uthe lamaphoyisa amabili, okukhona elingu-inspector nelingu-costable aneminyaka engu-37 newu-60, aphucwa izibhamu zawo zomthetho.
“Okwamanje ayikaziwa imbangela. Imindeni yamaphoyisa isashaqekile futhi ukuthungathwa kwababulali kuyaqhubeka.”
Esephetha uthe ikhansela lika-ward 52, uMnuz Moses Zulu, alilimalanga kulokhu kuhlaselwa. UMasipala waseThekwini unxuse amalungu omphakathi angaba nomkhondo ukuba alekelele ukuze kusheshe uphenyo ukuze kubanjwe abathintekayo kulokhu kubulawa kwamaphoyisa.
Esitatimendeni esithunyelelwe abezindaba, iPhini leMeya, uNkk Fawzia Peer, uphonsele inselelo izinhlaka zomthetho ukuba ziqinise imizamo yazo ukuze kuboshwe laba basolwa.
“Sicela amaphoyisa ukuba angashiyi lutho uma esephenya ukuze abophe ababulali. Sifuna babhekane nengalo yomthetho futhi bajeziswe kanzima ngecala labo. Ukubulala umuntu womthetho kufana nokuhlasela nokubukela phansi umbuso, kufanele ajeze kanzima.”
UNkk Peer ube esedlulisa amazwi enduduzo emndenini nakozakwabo bamaphoyisa.